ဒိုင်ယာရီစာအုပ်လေး – Hlataw.com
ဖိုးခွေးတစ်ယောက် ဟိုစာဒီစာ ဖတ်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ တောသားဟု ထင်မှတ်ထားသည်..။ သူ့အသက်က ခုမှ ဆယ့်ရှစ် နှစ်ကျော်ရုံသာ ရှိသေးသည်..။ သူ့ကိုယ်သူ အထင်ကြီးမည်ဆိုက ကြီးလောက်သည်..။ ဖိုးခွေက ဉာဏ်ကောင်းသည်..။ ရှစ်တန်းထိ နေဖူးသည်..။ အတန်းတိုင်း ပထမ ရသည်.။ အသက် ဆယ့်သုံး နှစ် ရှစ်တန်းရောက်သည့်နှစ်တွင် တမူးဖက်သို့ အရောင်းအဝယ်နှင့် သွားသော သူ့မိဘနှစ်ပါးမှာ ကားမှောက်၍ ကွယ်လွန်သွားကြသည်..။ တစ်ဦးတည်းသော သားမို့ ကျန်ရှိနေသော ပစ္စည်းအရပ်ရပ်ကို သူ့အဖေ ညီမ အဒေါ်ဖြစ်သူ မနုဝေက ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ကာ အမွေစားအမွေခံ အဖြစ် တရားဝင် မွေးစားလိုက်သည်..။ မနုဝေက အသက် သုံးဆယ့်ငါး နှစ်ခန့်ရှိ အပျိုကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်သည်..။ လယ်ဧကပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်သည့် တောသူဋ္ဌေးမဟု ပြောနိုင်သည်.. သို့သော် ဇိမ်နှင့် မနေ.. အလုပ်ကို သူမကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ်စီမံ လုပ်ကိုင်သည်..။
ရက်လည်ဆွမ်းကျွေးပြီး နောက်တစ်ရက်မှာပင် ဖိုးခွေးမိဘပိုင် အိမ်နှင့် လှည်းနွား လယ်ယာများကို အားလုံးရောင်းချပြီး ဖိုးခွေးနာမည်နှင့် ဘဏ်အပ်ထားလိုက်၏..။ စုစုပေါင်း ဆယ့်ငါး သိန်းကျော်လောက်ရှိ၏..။ ဆယ့်သုံး နှစ်ရောက်သည်အထိ ရှင်မပြု၇သေးသော ဖိုးခွေးကိုလည်း အလွန်ကြီးကျယ် ခန်းနားစွာ ရှင်ပြုပေးသည်..။ ထိုစဉ်မှ စ၍ ဖိုးခွေးတစ်ယောက် ကိုရင်ဘဝမှာ ပျော်မွေ့၍ လူမထွက်တော့..။ ရှစ်တန်းကျောင်းသားဘဝကတော့ ထွက်လိုက်ရသည်..။ မှတ်ဉာဏ် ၊ သဘောဉာဏ် ၊ စဉ်းစားဉာဏ် အလွန်ကောင်းသော ဖိုးခွေးတစ်ယောက် ရှင်သာမဏေ ဘဝဖြင့် ပထမငယ် ၊ ပထမလတ် ၊ ပထမကြီး ၊ နှစ်ချင်းပေါက် အောင်သည်..။ အဒေါ်ဖြစ်သူ မနုဝေတစ်ယောက် ပျော်တပြုံးပြုံး ပီတိတွေ ဖုံးကာ တူတော်မောင် ကိုရင်၏ ဂုဏ်ပြုပွဲကို ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ကျင်းပပြန်သည်.. ဤအဝတ်ဖြင့် မြဲသွားလျင် ဝမ်းသာကျေနပ်ပါသည်..။ လူဝတ်ကြောင်ဘဝရောက်လာလျင်လည်း စားဝတ်နေရေးအတွက် ပူစရာ မလိုပဲကိုး…။
မနုဝေတစ်ယောက် စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး ၊ ကုသိုလ်ရေးတို့ဖြင့် အချိန်ကုန်လျက်ရှိရာ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စကိုပင် သတိမရတော့လောက်အောင် ရှိနေပါတော့သည်..။ ကိုရင်ဖိုးခွေးတစ်ယောက် အကြီးတန်း အောင်ပြီး ဓမ္မာစရိယ တန်း မဖြေသေးပဲ မြို့ကျောင်းမှ ရွာကျောင်းသို့ ပြောင်းလာသည်..။ ရွာမှာ အေးအေးဆေးဆေးနေ၍ စာကျက်မည်ဟူသော စိတ်ကူဖြင့် လာခဲ့ရာ….. တစ်နေ့၌ ရှေးဟောင်းသိမ်ကြီးအတွင်းရှိ ရွှေပိန်းချ ဗီရိုကြီးအတွင်းက ပေစာထုတ်နှင့် ရှေးဟောင်း စာအုပ်တွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားသည်..။ ဗဟုသုတ ဥာဏ်ဓါတ်ခံရှိသူ နှင် စာအုပ်စာပေဆိုသည်မှာ ချဉ်သီးနှင့် ဆားကဲ့သို့ အလွန်လိုက်ဖက်သည်..။ မြို့ကျောင်းမှာနေစဉ်ကလည်း စာမေးပွဲ အတွက်သာမက အခြားအခြားသော မဂ္ဂဇင်း ဝတ္ထုများကိုလည်း အားလပ်ရက်များမှာ ဖတ်ခဲ့သည်..။ စာဖတ်ဝါသနာ ကြီးသော်လည်း စည်းကမ်းတကျ နေတတ်သူဖြစ်၍ စာမေးပွဲလည်း တစ်နှစ်တစ်တန်း အောင်ခဲ့သည်သာ…။
စာတော်သော ကိုရင်မို့ ရွာကျောင်းမှာ လဲ သူ့လက်သူ့ခြေသာ ဖြစ်သည်..။ ကိုရင် ဖိုးခွေးတစ်ယောက် စာအုပ်ဗီရိုထဲမှ စာအုပ်တွေ အပြင်သို့ထုတ်၏..။ တစ်အုပ်ချင်း ဖတ်ကြည့်ရာ လောကီကျမ်း ၊ ဆေးကျမ်း ၊ သျှတ္တရကျမ်း စာအုပ်တွေကို သီးခြားဖယ်ထားလိုက်သည်..။ ထိုနေ့မှ စ၍ အချိန်ယူကာ ဖတ်ပါတော့သည်..။ ဣတ္ထိဗီဇ ၊ ဣတ္ထိသျှတ္တရ ကျမ်းက ကိုရင်ဖိုးခွေးစိတ်ကို အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်..။ အရွယ်ကလည်း သွေးသားလှုပ်ရှားသည့် လူပျိုပေါက် အရွယ် ၊ နေရာကလည်း လူသူကင်းဝေးသည့် နေရာ…။ တွေးသမျှ ကြံသမျှ ဖတ်မိသမျှတွေကလည်း ရမ္မက်ဆန္ဒကို လှုပ်ဆွသော ကာမဝိတက်ကို တိုးပွားစေကြောင်း စာ….။ဘာမျှမကြာပါ..။ ကိုရင်ဖိုးခွေးတစ်ယောက် လူထွက်ချင်ကြောင်းသူ့အဒေါ် အပျိုကြီးကို ပြောကြားပါတော့သည်..။ အဒေါ်လုပ်သူက ပထမတော့ တားကြည့်ပါသေးသည်. မရ… မရမှန်းသိတော့ ဆက်မတားတော့. ကျေကျေနပ်နပ် ခွင့်ပြုလိုက်သည်..။
ဖိုးခွေးတစ်ယောက် အသံတွေ ပြောင်းလာသည်..။ လူကောင်ကလည်း ထွားလာသည်..။ မျက်နှာမှာလည်း ဝက်ခြံဖုလေးတွေ ပေါက်လာသည်..။ လူပျိုပေါက်အရွယ် ကိုရင်ဖိုးခွေး ဘာကြောင့် လူထွက်ချင်သလဲ ဆိုတာ တွေးမိပြီး အပျိုကြီး မနုဝေ ပြုံးမိလိုက်သည်..။ မနက်ဖန် ကျနော်လဲ တောလိုက်ခဲ့မယ်…. ပင်ပန်းမှာပေါ့..ဟဲ့….အိမ်မှာပဲ နေခဲ့…. ဟာ….ဒေါ်ဒေါ်ကလည်း ယောက်ျားပဲဗျ….ပန်း ပန်း…. တူအရီးနှစ်ယောက် ထမင်းစားရင်း အချီအချ စကားပြောနေကြသည်..။ မနုဝေက ကိုရင်လူထွက် တူတော်မောင်ကို ပင်ပန်းမည်စိုး၍ တောမလိုက်စေချင်..။ ဖိုးခွေးကလည်း အိမ်ထဲ အောင်းမနေလို..။ နောက်ဆုံးတော့ ဖိုးခွေးအလိုကျ လိုက်လျောလိုက်ရ၏…။ ဖိုးခွေးတစ်ယောက် ထမင်းစားရင်း လည်ဟိုက်အင်္ကျီအတွင်းက တင်းရင်း ဝင်းဝါနေသော အဒေါ်ဖြစ်သူ၏ နို့ကြီးနှစ်မွှာကို အမှတ်တမဲ့ ကြည့်လိုက်မိသည်.. ရင်တွေခုန်၍ မျက်နှာတစ်ခုလုံး ရှိန်းခနဲ ဖြစ်သွားသည်..။
မနုဝေ အသက်က အခုမှ သုံးဆယ့်ငါး နှစ်သာ ရှိသေး၏.. ဆူဖြိုးတောင့်တင်း ကျစ်လျစ်သန်စွမ်းသော ခန္ဓာကိုယ်က ယောက်ျားသားတို့ အာရုံကို လှုပ်ကိုင်ဖမ်းစားနိုင်စွမ်း အပြည့်ရှိသည်..။ အဒေါ်ပင် ဖြစ်လင့်ကစား အတူမနေရသည်မှာ ငါး နှစ်ခန့် ရှိခဲ့ပြီ…။ လူပျိုပေါက် အရွယ်တွင် သွေးသားက လှုပ်ရှားတတ်လာပြီမို့ စိတ်အာရုံက အဒေါ်၏ တပ်မက်စရာ ခန္ဓာကိုယ်ကို မသိမသာ ခိုး ခိုးကြည့်ရင်း ကိလေသာ တဏှာဓါတ်တွေ အထပ်ထပ် ရစ်ပတ်ခဲ့ရသည်..။ လူထွက်ပြီး တစ်လပြည့်မြောက် ယနေ့အချိန်ထိ အပြင်မထွက်ဖြစ်သေး…။ ရွယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် မပေါင်းတတ်သေးပဲ ဖြစ်နေသည်..။ စာမေးပွဲတွေ အောင်ထားသဖြင့် တစ်ရွာလုံးက ဂုဏ်ပြုခံထားရသူ ပီပီ ယခုလို လူထွက်လာသည့်အခါ အပြင် မထွက်ဝံ့တာလည်း ပါသည်..။ သည်တော့ ဘယ်မှ မထွက်ဖြစ်ပဲ အိမ်မှာပဲ အောင်း၍ စာဖတ်နေသည်..။ အဒေါ်တောသွားခိုက် အိမ်မှာ ဖိုးခွေးတစ်ယောက်ထဲ ဖတ်သည့်စာက။
ကျောင်းကယူလာသည့်….ဣတ္ထိဗီဇ ၊ ဣတ္ထိ သျှတ္တရ ကျမ်း..။ စားလိုက်အိပ်လိုက် ၊ စာဖတ်လိုက် ၊ တွေးချင်ရာ တွေးလိုက်နှင့် အတော်လေး ဟုတ်နေသည်..။ အဒေါ်ဖြစ်သူက အောက်ထပ်မှာ နေသည်..။ တစ်အိမ်လုံးမှ ဖိုးခွေးရယ် ၊ သူ့အဒေါ် မနုဝေရယ် ၊ ပြီးတော့ မနုဝေရဲ့ သူငယ်ချင်းလို့ ပြောရမလား ၊ အလုပ်သမားလို့ ပြောရမလား ၊ မန်နေဂျာလို့ ပြောရမလား မသိတဲ့ အသက် လေးဆယ် အရွယ်လောက်ရှိ တဲ့ မစန်းရီ ဆိုတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ၊ တစ်အိမ်လုံး ဤသုံးယောက်သာ ရှိသည်..။ မစန်းရီက ဤရွာသူ မဟုတ်…။ အရောင်းအဝယ် ကိစ္စနှင့် ဗန်းမော်သွားရာမှ ခင်မင် ရင်းနှီးလာခဲ့သူဖြစ်သည်..။ ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက်က ရောက်လာမှန်း မသိသော်လည်း ဖိုးခွေး ကိုရင်ဘဝနှင့် မန္တလေးမှာ စာသင်နေစဉ် ရောက်လာတာ ဖြစ်မည်…။ မစန်းရီ ၏ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကို အသေအချာ မသိရသေးသော်လည်း သားသမီး မရသည့် နှစ်လင်ကွာ နှစ်ခုလပ် ဆိုတာလောက်တော့ ဖိုးခွေး သိထားသည်..။
မစန်းရီက ရှမ်းကချင် ကပြား ၊ တိုင်းရင်းသူ ဖြစ်သည်..။ ထို့ကြောင့် သစ္စာရှိသည်..။ ကျေးဇူးသိ၏..။ အခွင့်အရေး မယူ ။ တာဝန်ကျေသည်..။ ပွင့်လင်းပြတ်သားသည်..။ သူအဒေါ် အပေါ်သာ မဟုတ်..။ မစန်းရီ အပေါ်မှာလည်း စိတ်ကူးနှင့် ဖောက်ပြန်နေခဲ့သည်..။ နှစ်ယောက်စလုံး တောင့်တောင့် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးတွေ..ဖြစ်သည်..။ အဖုအထစ် အမို့အမောက်တွေနှင့် ပြည့်စုံကြသည်..။ နှစ်ယောက်ယှဉ်မိလျင် အဒေါ်ဖြစ်သူအပေါ် ပို၍ တိမ်ညွှတ်မိသည်..။ အဒေါ့် အသားအရေက ဝါညိုရောင် အသားလတ်..။ မစန်းရီ အသားအရေက ကချင် ရှမ်း အစပ်မို့ အသားနီစပ် ။ အဒေါ်က ခါးသွယ်ပြီး တင်ဆုံကြီးသည်..။ မစန်းရီက ခါးအနည်းငယ် တုတ်ပြီး တင်ဆုံကြီးသည်..။ အဒေါ့်တင်ဆုံက ဝိုက်ထွားဖြိုးကောက်သည်..။ မစန်းရီတင်ဆုံက ကြီးထွားသည်မှန်သော်လည်း ကောက်ချိတ်မနေပဲ လုံးပြားပြား သဏ္ဍာန်…ဖြစ်သည်..။
ဟိုမုန်းဓါတ်အားတွေ အလွန်ကောင်းသော လူပျိုသိုး တစ်ယောက်အဖို့ နှစ်ယောက်လုံး လိုးချင်စရာတွေသာ ဖြစ်၏..။ လွန်ခဲ့သော ရက်တွေက အဒေါ်ဖြစ်သူ၏ အခန်းကို လျှို့ဝှက် ထောက်လှမ်းကြည့်ရာ လီးအတု ဟုထင်ရသော တစ်ပေခန့် အသားတစ်ချောင်း တွေ့ရသည်.. လုံးပတ်က ငါး လက်မခန့် ရှိသည်… ။ အသားချောင်းပတ်ပတ်လည် ကို သိုးမွှေးထိုးသော ချည်များဖြင့် စီထပ်ရစ်ပတ် ထားသည်..။ ထိပ်နှစ်ဖက်က အနည်းငယ် ဖုသည်ဖြစ်ရာ ဒစ်ဆံ သဘောမျိုး ဖြစ်သည်..။ စေးပျစ်သော ကော်သုတ်ထားသည့်ပုံဖြစ်ရာ ဖိုးခွေးက စပ်စပ်စုစု နမ်းကြည့်၏..။ ညှီသိုးသိုး အောက်သက်သက် အနံ့တစ်မျိုး ထွက်နေသည်..။ အရွယ်နှင့် မမျှအောင် ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝနေသော ဖိုးခွေးတစ်ယောက် ဘာဆိုတာ ရိပ်မိလိုက်သည်..။ သူ့အဒေါ်နှင့် မစန်းရီ တို့ ဘာကြောင့် ဤမျှ ရင်းနှီးကြကြောင်း သဘောပေါက်သွားသည်.. မစန်းရီက အတွေအကြုံ ဗဟုသုတ စုံသည်..။
တရုတ်နယ်စပ်တို့ သူပုန်စခန်းသို့ မကြာမကြာ ရောက်လေ့ရှိရာ သူတွေ့ကြုံ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ဗဟုသုတတွေဖြင့် သူ့အဒေါ်ကို ပညာပေးနေပုံ ရသည်..။အဒေါ်ဖြစ်သူနှင့် မစန်းရီတို့၏ အတွင်းရေး လျှို့ဝှက်ချက်များကို သိလိုက်ရ၍ ဖိုးခွေး တစ်ယောက် အတော်လေး ကျေနပ်ပျော်ရွှင်သွားသည်…။ ဆန်းကျယ်သော ကာမရာဂ အတွေးများကလည်း တရိပ်ရိပ် တဖွားဖွား ထွက်ပေါ်လာသည်..။ ဖိုးခွေး လီးအတုကြီးကို သူ့နေရာသူပြန်ထားလိုက်သည်..။ ထို့နောက် စားပွဲခုံ အံဆွဲကို ဆွဲဖွင့်ပြန်သည်..။ ဖိုးခွေး မျက်လုံးတွေ ပြူးကျယ်သွားသည်..။ တိုင်းမဂ္ဂဇင်း ဆိုဒ်ရှိ စာအုပ်အဖုံးပေါ်တွင် မြင်ကွင်းကျယ် ရိုက်ထားသော ဧရာမ စောက်ဖုတ်ကြီးနှင့် နှစ်လက်မခန့် အကွာလောက်တွင် ဧရာမ လီးထိပ်ကြီးက ရောက်ရှိနေပြီး သုတ်ရေတွေ စက်လက် ထွက်ကျနေပုံ ဖြစ်သည်..။ ရိုက်ချက်က ကောင်းလှသဖြင့် သုတ်ရေစက် သုံး စက် ကျနေပုံမှာ ပီပြင်လှသည်..။
ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ကွာဟု သဘောထားပြီး ဖိုးခွေး ထိုစာအုပ်ကို ယူလာခဲ့သည်..။ အပေါ်ထပ် သူ့အခန်းထဲ ရောက်သောအခါ တံခါးကို ဂျက်ထိုးပိတ်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့မှ စာအုပ်ကို အစအဆုံး ပြန်ကြည့်သည်..။ ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်း ကာမရာဂ စိတ်တွေ ထကြွလာပြီး သူ့ပေါင်ကြားက လီးကြီးမှာ မတ်ထောင်လာတော့သည်..။ ဖိုးခွေးတစ်ယောက် ဂွင်းတိုက်ပြီး အရသာခံတတ်လာသည့်တိုင် ယခုအချိန်ထိ ဒစ်မလန်သေး..။ အရေဖျားထူသည့်အတွက် ကြောင့်လား မသိ ။ ဂွင်းတိုက်သက် ရလာသော်လည်း လီးက ယခုအချိန်ထိ မလန်သေး..။ ဖြဲလျင် ပြဲနေသည့်တိုင် မကြာခင် အရေဖျားက ပြန်ပြန် ဖုံးသွားတတ်သည်.. ။ တစ်နေရာတွင် တရုတ်မနှင့် ဆင်သော မိန်းမတစ်ယောက်က မတ်တတ်ရပ်ပေးနေသော ဘဲ၏ လီးကြီးကို ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်ပေးနေသည်..။ ဘဲ၏ မျက်နှာကိုတော့ မမြင်ရ..။ ဘဲ၏ ပုံကို ချက်အထက် တစ်ထွာကျော်ကျော်လောက်နှင့် ဒူးခေါင်း အောက်ပိုင်းလောက်သာ ရိုက်ပြထားသည်..။
မိန်းမက ဘယ်ဖက်လက်ဖြင့် တင်ပါးကို ဖက်ထားပြီး ညာလက်ဖြင့် လီးတန်ကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ကာ ဒစ်ပြဲကြီးကို ပါးစပ်ဖြင့် တေ့စုပ်နေပုံ ဖြစ်သည်..။ မျက်နှာကလည်း ဖီလင် အပြတ် တက်နေသော မျက်နှာမျိုး ..။ မျက်နှာမြင်ရတာနဲ့ တင် လီးတောင်ချင်စရာ မျက်နှာထား မျက်နှာပေါက်ပုံမျိုး ဖြစ်သည်..။ ထိုပုံကို ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်း ဖိုးခွေး ပေါင်ကြားထဲက လီးတန်ကြီးမှာ ပို၍ ပို၍ တောင်မတ်လာသည်..။ လီးတန်ကြီး တစ်ခုလုံး သိသိသာသာ အကြောတွေ အရေဖျားတွေ တင်းမာလာသည်..။ ဖိုးခွေးက လီးတန်ကြီးကို ခပ်တင်းတင်း ဆုတ်ကိုင်၍ ဆယ်ချက်ခန့် ဂွင်းတိုက်ပစ်လိုက်သည်..။ ဖိုးခွေး လချောင်းတစ်လျောက်လုံး ထူပူ ယားတက်လာသည်..။ ကြည့်လက်စ ပုံကို ခဏရပ်ထား၍ စောစောကလို ဂွင်းတိုက်ပြန်သည်..။ ဒီတစ်ခါ ရပ်မပစ်ပဲ ဆက်ခါဆက်ခါ တိုက်သည်.. အချက် ငါးဆယ် ကျော်သောအခါ လရေတွေ ပန်းထွက်ကုန်တော့သည်..။
တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ တုန်ခါလျက် လရေထွက်သော အရသာကို အသေအချာ ခံစားနေသည်..။ အောက်ကြမ်းပြင်ပေါ် ပေပွ ပြန့်ကျဲနေသော လရေတွေကို ပုဆိုးအဟောင်းနှင့် သုတ်ပြစ်လိုက်သည်..။ အကင်းမသေ သေးသော လီးကြီးကို လက်ဖဝါးပေါ် တင်၍ စိတ်နှင့် မှန်းကာ တိုင်းထွာကြည့်သည်..။ အရှိန်အနည်းငယ် လျော့သွားသော်လည်း လက်ဖနောင် အရင်းဆီမှ လက်ခလယ်ထိပ်ထိ ကွက်တိ ဖြစ်နေသည်..။ ပေတံနှင့် တိုင်းကြည့်သောအခါ ရှစ် လက်မနည်းနည်း ကျော်သည်..။ သူ့ အဒေါ်နှင့် မစန်းရီတို့ ရသေ့စိတ်ဖြေ ကမျင်းကြောထ ထားသော လီးတုထက် သူ့လီးတန်ကြီးက ပိုရှည် ပိုတုတ်နေသည်..။ ပြီးတော့ ဟိုဟာက အသက်ဝိဉာဉ် ကင်းသော အဝိညာဏက လီးအတု ။ သူ့ပေါင်ကြားထဲ ရှိနေတာက အသွေးအသား အကြောများနှင့် ဖွဲစည်းထားသော ကာယဝိညာဉ် သဝိညာဏက လီးအစစ်.. အရသာပေးပုံမှာ မိုးနှင့် မြေပမာ အကွာကြီး ကွာခြားလှသည်..။
ဖိုးခွေး စာအုပ်ကို ပြန်ပိတ်၍ ခေါင်းအုံးအောက်သို့ ထိုးသွင်းလိုက်သည်..။ လုပ်စရာရှိတာလုပ်ရန် အောက်ထပ်သို့ ဆင်းခဲ့သည်..။ ထိုနေ့မှ စ၍ ယနေ့အချိန်ထိ သူ့အဒေါ်တို့ တောသွားတိုင်း စာအုပ်ကြည့် ဖီလင်တက် လီးတောင် ဂွင်းတိုက် ဖြစ်နေခဲ့သည်..။မနုဝေတစ်ယောက် သူ့အံဆွဲထဲက ပျောက်ဆုံးသွားသော အပြာပုံစာအုပ်ကို ကြိတ်၍ ရှာသည်..။ ယခုအချိန်ထိ မတွေ့သေး..။ တူတော်မောင် ဖိုးခွေးလက်ချက် ဖြစ်မည်..။ ပေါ်တင်လည်း မေးလို့မဖြစ်..။ ထို့ကြောင့် ခပ်တည်တည်နှင့် မသိချင်ယောင် ဆောင်နေသည်..။ စိတ်ထဲကမူ ယောက်ယက်ခတ် ဗျာများလျက် ရှိသည်..။ စိတ်ကလည်း နှစ်ခွ ဖြစ်နေသည်.။ ကျေလည်း ကျေနပ်သည်..။ ရှက်လည်း ရှက်သည်..။ ဤကိစ္စအတွက် မစန်းရီနှင့် တိုင်ပင်ကြည့်သည်..။ ရီ ရေ….ကိုယ်တို့တော့ စောက်ရှက် တော့ ကွဲပြီ.. ဘာဖြစ်လို့လဲ…ဝေ ရဲ့…. ဟို….အံဆွဲထဲက အပြာပုံ တွေ ပါတဲ့ စာအုပ်ကြီး မရှိတော့ဘူး။
ဟင်….ဘယ်ရောက်သွားလို့လဲ…. ဟို….လူပျိုသိုးလေး ဝင်မွှေလို့ တွေ့သွားတာနဲ့ တူတယ်… အဟင်း…ဟင်း…ကောင်းတာပေါ့..ဝေရာ…. မစန်းရီက မချိုမချဉ်ပြုံးရင်း ပြောသည်..။ ဟင်းနော်…လူမှ စိတ်ညစ်လို့ သေချင်စော်နံနေပါတယ် ဆိုမှ….သူက ပြုံးစိစိနဲ့…. ဘာစိတ်ညစ်စရာ ရှိလဲ ဝေရဲ့….ဘာဆန်းလို့လဲ..သူလဲ ဗဟုသုတ ရှိသွားတာပေါ့…. အဲဒီကောင်က မွေးစားသား တူအရင်းဟဲ့…ကောင်မရဲ့…. အမလေး…ပိုတောင် ကောင်းသေး…မွေးစားသားပါဆိုမှ..ကိုယ်အချိန်မရွေးစားလို့ရအောင် မွေးထားတဲ့ သားပဲ…ဆန်းတာကျလို့..အဟင်းဟင်း… ပြောလေ…..ကဲလေနော်….. မနုဝေ ရှက်ကန်ကန်ပြီး မစန်းရီ ပေါင်ကို လှမ်းဆိတ်သည်..အားလားလား…နာတယ်ဟဲ့..ကောင်မရဲ့..ဟုတ်တာပြောတော့ ရှက်မနေနဲ့…လီးအတုကြီးနဲ့ ကမျင်းရတာထက်စာရင်ဒါကအစစ်နော်….ဘယ့်နှယ့်လဲ..စားလိုက်ရမှာလား…လူပျိုဘဝက ချွတ်ပေးလိုက်ရမှာလား….။
မနုဝေ မျက်နှာ ကွက်ကနဲ ပျက်သွားသည်.. အမှန်က မစန်းရီက စနောက်လိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်၏..။ သူ့ကျေးဇူးရှင် သခင်မအပေါ် ဘယ်သောအခါမှ သစ္စာဖောက်မည့်သူ မဟုတ်ပါ…။ သို့သော် မနုဝေ၏ အတွင်းစိတ်ကို သိလိုက်ရ၏..။ အမလေး..ဟဲ့…စတာပါနော်….မိန်းမရဲ့…ဖြစ်နေလိုက်တာ….သူများစားဖို့ မွေးထားတဲ့ သားကို ကျမက ခွင့်ပြုချက် မရပဲ ခိုးမစားပါဘူးနော်…စိတ်ချ…စိတ်ချ…. အယ်…..ဘာတွေ လျှောက်ပြောနေတာလဲ…… မနုဝေမှာ ရှက်သွေးကြောင့် မျက်နှာကြီး တစ်ခုလုံး နီမြန်းသွားရသည်..။ နောက်တစ်ကြော့ ဆွဲဆိတ်ရန် လက်ကို အမြှောက် မစန်းရီက ဖမ်းဆုတ်ထားလိုက်သည်..။ စတာပါ ဝေရယ်….တကထဲ… တောထဲက ပြန်လာပြီးနောက် စာအုပ်ပျောက်သည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ယောက်သား အခန်းထဲတွင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြိတ်တိုင်ပင်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်.. ဖိုးခွေး စာအုပ်ယူသွားပြီးနောက် ၃ ရက်အကြာမှ သိရခြင်း ဖြစ်သည်..။
ဖိုးခွေးမရှိခိုက် သူ့အခန်းထဲ ဝင်ရှာသည်..။ သေနာလေးက အသိမ်းကောင်းလှသည်..။ လုံးဝမတွေ့..။ ပေါ်ပေါ်တင်တင်လည်း မရှာရဲ…။ မသိမသာ ရှာရ၏..။ ရှာမတွေ့သည့်အဆုံး ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်ဟာ ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သည်..။ ထိုနေ့မှ စ၍ ဖိုးခွေးကို သတိထား အကဲခတ်နေရတော့သည်..။ စောစောက ဖိုးခွေးပြောသော စကားကို ပြန်လည်ကြားယောင်မိသည်..။ ဘာတဲ့….ယောက်ျားပဲဗျာ…ပန်းပန်းတဲ့…။ ပြီးတော့ သူ့ရင်သားတွေကို အရောင်တလက်လက်ထွက်နေသော မျက်လုံးတို့ဖြင့် စူးစူးရဲရဲ ကြည့်နေခဲ့သည်..။ မနုဝေက မသိချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်သည်..။ သို့တိုင် ရင်ထဲ ရှိန်းခနဲ ဖိန်းခနဲ နွေးသွားသည်..တူပင် ဖြစ်လင့်ကစား ကိလေသာ ဗို့အားပြင်းသော ရမ္မက်အကြည့်တွေက မ သတ္တဝါဖြစ်သော သူမရင်ကို လှုပ်ခတ်စေခဲ့သည်..။ ရမ္မက်သွေးတို့ကို ပူနွေးစေခဲ့သည်.. သူမကိုယ်တိုင် ဤလည်ဟိုက်အင်္ကျီကို တမင်ရွေးဝတ်ခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား..။
မစန်းရီက နွားနို့ညှစ်နေသဖြင့် သူတို့နှစ်ယောက်တည်း ရှိသည်..။ မင်း….နက်ဖန်ခါ တကယ်လိုက်မှာနော်….. မနုဝေက သေချာအောင် ထပ်မေးလိုက်သည်..။ အမှန်တော့ စကားဆက်ပြတ်သွား၍ ပြန်ခေါ်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်..။ ဒေါ်ဒေါ်ကလဲ……ယောက်ျားပါလို့ ဆိုနေ….. အေးပါ….အေးပါ..ကောင်းပြီ…ပြီးကျမှ ပင်ပန်းလို့ဆိုပြီး ယောက်ပြား ဖြစ်မသွားနဲ့….. အမယ်…..စိန်လိုက်စမ်းပါဗျာ…..ဒီမယ်ကြည့်…. ဖိုးခွေးက သူ့လက်မောင်းကို ကွေးပြ၏..။ ဖုထစ်မာကျောသော ကြွက်သားဆိုင်ကြီးက အကြောပြိုင်းပြိုင်းထလျက် ရှိသည်…..။ အဟင်း ဟင်း…..ကောင်းပါပြီ….တော်…. မနုဝေက ဣနြေ္ဒဆယ်ဟန် လုပ်ရင်း ရီရီမောမော ပြောကာ စားပြီးသော ပန်းကန်များကို သိမ်းဆည်း သွားသည်..။ ဖိုးခွေးက အဒေါ်ဖြစ်သူ၏ အိစက်ဖွံ့ထွားလှသော တင်ဆုံကားကားကော့ကော့ကြီးကို အငမ်းမရ ကြည့်ပြီး ထလာခဲ့သည်..။ မနုဝေတစ်ယောက် အချိန်မဆွဲလိုတော့ပဲ မွေးစားသာ တူမောင်နှင့်။
လင်မယားလုပ်တမ်း ကစားရန် အကွက်ချ ကြံစည်နေပါတော့သည်..။ ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း ကျန်းမာရေးအတွက် သူတို့ သုံး ယောက် နွားနို့်တစ်ခွက်စီ သောက်လေ့ရှိကြသည်..။ နွားလေး သုးံကောင် မွေးထားသည်..။ နွားမ သုံးကောင်ဆီက အလှည့်ကျ ညှစ်ယူသည်..။ ထိုတာဝန်ကို မစန်းရီက ယူထားသည်..။ ည နွားနို့သောက်ကြလျင် မစန်းရီ ခွက်ထဲ အိပ်ဆေးခပ်ထားမည် ဟု မနုဝေ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်..။ ဖိုးခွေး နွားနို့သောက်ပြီး အပေါ်ထပ် တက်မည် ပြုစဉ်… ဟဲ့….အိပ်တော့မို့လား…အစောကြီး ရှိသေးတယ်…. စာဖတ်စရာ ရှိလို့ ဒေါ်ဒေါ်…ဘာဖြစ်လို့လည်း….. ရင်မာတို့ဆိုင် ကြက်ဥ သွားဝယ်ခိုင်းမလို့…. ရတယ်လေ….သွားဝယ်လိုက်မယ်….ဒေါ်ဒေါ်… ရော့ ရော့…ပိုက်ဆံ .. ဆယ်လုံး ဝယ်ခဲ့…. ဖိုးခွေးက သူ့အဒေါ်ထံမှ ပိုက်ဆံ ယူပြီး မရင်မာတို့ ဆိုင်ဖက် ထွက်လာခဲ့သည်..။ မရင်မာတို့ဆိုင်က ရွာလည်လောက်မှာမို့ အနည်းငယ်လှမ်း၏..။
ကြက်ဥ ဆယ်လုံးလောက် ပေးပါဗျို့…. မရင်မာ တစ်ယောက် ခေါင်းငုံ့ပြီး ပိုက်ဆံတွေ ရေတွက်နေရာမှ ဖျတ်ခနဲ မော့ကြည့်လိုက်သည်..။ အယ်..တော့…..ဘယ်သူများလဲလို့…ကိုရင်လူထွက် ငါးပိချက်ကြီးပါလား….အခုမှပဲ တွေ့ရတော့တယ်..။ အခုမှ စိမ်းကားသွားပြီပေါ့လေ….. မရင်မာ ပြောလည်း ပြောစရာပင်..။ ကိုရင်ဘဝတုံးက စားအိမ်သောက်အိမ်.။ မန္တလေးရောက်လျင် လည်း သူမဆီမှာပဲ တည်းသည်..။ ဘုရားဖူးအပါအဝင် ဈေးချိုဈေးဝယ်တာက အစ ကိုရင်ဖိုးခွေးလိုက်ပို့ရသည်..။ အဒေါ်ဖြစ်သူထက်ပင် တရင်းတနှီး ရှိလှသည်..။ မရင်မာတို့ဖက် မရောက်တာက ကိုရင်လူထွက် မောင်ဖိုးခွေး တစ်ယောက် ရှက်နေသောကြောင့် ဖြစ်၏..။ မရင်မာက မျက်စောင်းချိုချိုလေး ထိုးရင်း မဲ့ကာ ရွဲ့ကာ ပြော၏..။ အသံနှင့် ဟန်ပန်အမူအယာထဲတွင် ဆွဲငင်အား ညှို့အားတွေ အပြည့်ပါသည်..ဟု ဖိုးခွေး စိတ်ထဲ ခံစားရသည်.. ကိုသိန်းထွန်းကလဲ ခဏခဏ ပြောနေတာ…။
အတော်စိမ်းတဲ့ ကိုရင် ဖိုးခွေးတဲ့…သိရဲ့လား…. ကိုသိန်းထွန်း ရှိလား…. မရှိဘူး…မနေ့ကမှ မုံရွာဖက် သနပ်ခါး သွားဝယ်တယ်… ဆယ့်ငါး ရက်လောက်ကြာမှာ …ညလာခဲ့ပါလား….စကားပြောရအောင် …လက်ဖက်ကောင်းကောင်း သုတ်ထားလိုက်မယ်…… ဖိုးခွေးက လက်ဖက်ကြိုက်တတ်မှန်း မရင်မာက သိ၏ ..။ ရွာလာလျင် ဖြစ်စေ ၊ မန္တလေး ရောက်လျင် ဖြစ်စေ လက်ဖက်သုတ်ကျွေးရသည်..။ လာ….ထိုင်အုံးလေ….. မရင်မာက ဆိုင်ပေါ်လာရန် လှမ်းခေါ်သည်..။ ဘက္ထရီ မီးရောင်အောက်တွင် မရင်မာတစ်ယောက် သနပ်ခါး အဖွေးသားနှင့် အလှကြီး လှနေသည်..။ ဒီနေ့တစ်နေ့လုံး မရိုးသားခဲ့သော ဖိုးခွေးတစ်ယောက် မရိုးသောစိတ်ဖြင့် မရင်မာကို ကြည့်နေမိပြန်သည်..။ ထိုမှ တဆင့် ရွှေလိမ္မော် ၊ ကျားကော အရက်ပုလင်းများဆီသို့ မျက်စိရောက်သွား၏..။ ဟောတော့…..ထိုင်ပါအုံးလို့…..ဆို… မထိုင်တော့ဘူး…..မရင်မာ….ရွှေလိမ္မော် တစ်ပုလင်း ပေးပါ….။
မရင်မာက ရွှေလိမ္မော် တစ်ပုလင်း ယူပေးလိုက်သည်.. ပိုက်ဆံ မပေးနဲ့ အလကား ယူသွား….. မရင်မာက ကြက်ဥဖိုးရော ရွှေလိမ္မော်ဖိုးပါ တစ်ပြားမှ မယူလိုက်ပါ..။ ကြက်ဥ ငါး လုံးပင် ပိုထည့်ပေးလိုက်သေးသည်..။ ညလာမှာလား…..မြင့်မြင့်ကြည်ကို ခေါ်ထားရမှာလား…. ဒေါ်ဒေါ်အိပ်ရင် ….လာခဲ့မယ်….လေ….သိပ်မိုးချုပ်ရင် ဖြစ်ပါ့မလား…. အမလေး…..ကိုလူပျိုရဲ့….သန်းခေါင်ကျော်လာလာ….ရတယ်…စောင့်နေမယ်နော်….တကယ်လာခဲ့….. မရင်မာက မျက်စောင်းထိုးရင်း ပြောပြန်၏ ..။ သည်တစ်ခါ မျက်စောင်းထဲတွင် ကြာမူတွေ သိသိသာသာ ပါလာသည်..။ ရမ္မက် အခိုးအငွေ့တွေ ယှက်သန်းနေသည်..။ မြင့်မြင့်ကြည်ဆိုတာက မရင်မာ၏ ညီမ အငယ်ဆုံး ဖြစ်သည်..။ ကိုရင်ဘဝထဲက စနေနောက်နေကျသည်..။ မရင်မာတို့နှင့် တစ်အိမ်ကျော်တွင် သူ့အမေတို့နှင့် အတူနေသည်..။ ဖိုးခွေးနှင့် သက်တူရွယ်တူ….။
ကဲ….သွားပြီနော်….. အင်း အင်း….လာဖြစ်အောင် လာခဲ့နော်…..စောင့်နေမှာ…သိလား….. အင်း….ပါ… အပြန် ဖိုးခွေး မျက်စိထဲတွင် မြင့်မြင့်ကြည် ရုပ်လွှာက မပေါ်လာပဲ မရင်မာ၏ ရုပ်လွှာကသာ စိုးမိုးနေသည်..။ ဖြူဝင်းသော အသားအရေ ၊ သနပ်ခါး အဖွေးသား မျက်နှာ ၊ တင်းမို့နေသော နို့အုံနှစ်မွှာ ၊ ကြာမူပါသော မျက်လုံး ၊ ကလေးမွေးပြီးတာ မကြာသေး တစ်သားမွေး တစ်သွေးလှ နေသလား မပြောတတ်…။ မရင်မာတည်းဟူသော အအိုမ၏ ခန္ဓာကိုယ်က ဖိုးခွေး ကိလေသာ စိတ်ကို ပိုပြီး ထကြွစေခဲ့သည်ကတော့ သေချာသည်..။ ဖိုးခွေး ဝင်းတံခါး ဖွင့်၍ ဝင်ခဲ့သည်…။ အ်ိမ်ထဲ ရောက်တော့ အသံဗလံတွေ တိတ်ဆိတ်နေသည်…။ စောစောက တော့ အသံပေးမည်ဟု စိတ်ကူးမိသည်..။ တိတ်ဆိတ်ပုံက အနည်းငယ် ထူးဆန်းနေသည့်အတွက် အသာလေး အဒေါ့်အခန်းဆီသို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်..အင်း…..ရှီး…..ကျွတ် ကျွတ်…..အား ……အား…အ။
အခန်းနား ရောက်သောအခါ အသံသဲ့သဲ့ ကြားရသည်..။ အခန်းက လျှာထိုးသားတွေနှင့် ကာထားသဖြင့် လုံနေသည်.. ။ အသံတွေသာ ကြားနေရသည်..။ ချောင်းကြည့်စရာ အပေါက်က မရှိဖြစ်နေသည်..။ အား…..ကျွတ်ကျွတ်…..အမလေး…….ကျွတ်ကျွတ်…..ပွတ်….ဖလွတ်…..ပြက်…ပြတ်…ပလပ်………… သူ့အဒေါ်တစ်ယောက် သူ့ကို ပထုတ်ပြီး ဘယ်အကောင်နှင့် ချိန်းတွယ်နေကြမှန်း မသိ…။ ဖိုးခွေးရင်ထဲ ဒေါသလှိုင်းတွေ ထန်လာသည်..။ အမှောင်ထဲတွင် ကျင့်သားရလာပြီမို့ ဝိုးတဝါး မြင်လာရသည်..။ စားပွဲခုံ ရှိရာသို့ သွား၏…။ ကြက်ဥအိတ်နှင့် ရွှေလိမ္မော် ပုလင်းကို စားပွဲပေါ် တင်သည်…။ ရေအိုးစင်မှ ရေတစ်ခွက်ခပ်ယူလာသည်…။ ကြက်ဥတစ်လုံး ဖောက်သောက် ပြီး ၊ ရွှေလိမ္မော် ပုလင်းကို ဖွင့်ကာ ပါးစပ်နှင့် တေ့မော့ချသည်..။ လိမ္မော်နံ့သင်းသော အရက်ပြင်းတွေက ရင်ထဲ ပူဆင်းသွားသည်..။ ရေတစ်ဝက်သောက်ပြီး အခန်းဆီသို့ ပြန်လာသည်…။
အပေါက်တွေ့လိုတွေ့ငြား အခန်းပတ်လည် လှည့်ရှာသည်..။ ကံအားလျော်စွာ တံခါးက ဂျက်ထိုးပိတ်ထားသည့်တိုင် အနည်းငယ် ဟနေ၏ ..။ ချောင်းကြည့်လို့ ကောင်းကောင်း မြင်ရသည်..။ အပြင်းစား အရက်မို့ တရိပ်ရိပ် တက်နေသည်…။ တစ်ကိုယ်လုံး မြူးထူး ကြွနေပြီ…။ သတ္တိတွေ တက်လာသည်..။ ဖိုးခွေး ဟနေသော အပေါက်က အတွင်းသို့ ချောင်းကြည့်လိုက်သည်..လားလား …မြင်ကွင်းက ကြက်သီးထစရာကောင်းလွန်းလှသည်…ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းနှင့် ဖိုးခွေးအားမလိုအားမရ ရှေ့သို့အတင်းတိုးကပ်ကြည့်သည်…။သူ့အဒေါ်နဲ့ မစန်းရီတို့မှာ အဝတ်မဲ့ ကိုယ်လုံးကြီးများနှင့်တစ်ယောက်စောက်ဖုတ်ကို တစ်ယောက် ယက်ပေးနေကြသည်..။ သူ့အဒေါ်က မစန်းရီကိုယ်လုံးပေါ်မှ ခွ၍ မစန်းရီပေါင်ကြားက စောက်ဖုတ်ကြီးကို ယက်ပေးနေသလို အောက်က ပက်လက်အိပ်နေသော မစန်းရီကလည်း သူမမျက်နှာနားကပ်နေသော သူ့အဒေါ်ဖင်ကြားက စောက်ဖုတ်ကြီးကို ယက်ပေးနေပုံရသည်..။
ထူးခြားတာက သူ့အဒေါ်ကသာ မစန်းရီစောက်ဖုတ်ကို ဆက်ယက်နေပြီး မစန်းရီက အိပ်ပျော်သွားပုံရသည်..။ လှုပ်ရှားမှု ကင်းမဲ့နေသည်..။ ဖိုးခွေးချောင်းကြည့်နေစဉ်မှာပင် သူ့အဒေါ်က မစန်းရီးကိုယ်ပေါ်က ခွာလိုက်ပြီး မစန်းရီဘေးတွင် ဒူးတုတ်ထိုင်ကာ မစန်းရီလက်မောင်းကို လှုပ်၍ နှိုးသည်..။ မစန်းရီ….မစန်းရီ…..ကျစ်….ဟဲ့ မစန်းရီ…. လှုပ်ခါရမ်းနေသော နို့အုံတင်းတင်းမို့မို့ကြီးက မီးရောင်အောက်တွင် ဝင်းပြောင်နေသည်..။ ဤမျှ လှုပ်နှိုးတာတောင် မစန်းရီက တုတ်တုတ်မျှမလှုပ်..။ နောက်ပြီး သူ့အဒေါ်အမူအယာက အိပ်ပျော်သွားသည့်အတွက် စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေပုံမျိုး လုံးဝမဟုတ်ပဲ တကယ်အိပ်မအိပ် သေချာသည်ထက် သေချာအောင် စမ်းသပ်နေပုံမျိုးဖြစ်သည်..။ ဖိုးခွေးတစ်ယောက် အဝတ်မဲ့နေသော ကိုယ်လုံးကြီးဖြင့် မစန်းရီကို လှုပ်လှုပ်နှိုးနေသော သူ့အဒေါ်ကိုကြည့်ကာ လီးတောင်လာသည်..။
လှုပ်လှုပ်နှိုးလိုက်တိုင်း တင်းရင်းဝင်းပြောင်သော နို့အုံကြီးနှစ်မွှာက ရမ်းခါနေသည်..။ လက်တစ်ဖက်က လှုပ်နှိုးရင်း ကျန်လက်တစ်ဖက်က သူ့စောက်ဖုတ် သူနှိုက်နေသည်..။ ဖိုးခွေးတစ်ယောက် အရက်အရှိန်ရော ရမ္မက်အရှိန်ပါ တရိပ်ရိပ် တက်လာပြီ..။ ကြောက်စိတ်မှန်သမျှ ကွာကျသွားပြီ…။ အရက်ကလေးတမြမြ ရမ္မက်သွေးကလည်း ကြွ ကာမရာဂစိတ်တွေကလည်း အရမ်းကာရော ထလာပြီမို့ ခပ်ရဲရဲပင် တံခါးကို ခေါက်လိုက်သည်..။ ဒေါက်ဒေါက်….ဒေါက်ဒေါက်….ဒေါက်..ဒေါက်…. တံခါးခေါက်သံကြားသဖြင့် သူ့အဒေါ်က ကပျာကယာ ထမီတစ်ထည်ကို ကောက်စွပ်သည်..။စောင်ပါးတစ်ထည်ကို ဆွဲယူ၍ မစန်းရီကိုယ်ပေါ်ကို လုံအောင်ဖုံးလိုက်၏ .ပြီးကုတင်ပေါ်က ကပျာကယာ ဆင်းလာသည်..။ ဖိုးခွေးတစ်ယောက် အသံထွက်ပြီး မရယ်မိအောင် အတော်လေး မြိုသိပ်ထားရသည်..။ သူ့အဒေါ် တံခါးနားရောက်လာမှ နှစ်ပေလောက်အကွာ နောက်သို့ဆုတ်လိုက်သည်..။
ချောက်…. မင်းကလဲ…ကြာလိုက်တာ…ရင်မာနဲ့များ ညားနေသလားအောက်မေ့ရတယ်…၊ ခိုင်းလိုက်ရင် ဒီလိုချည့်ပဲ….. အခုမှ အိပ်ယာကထလာရသော ပုံစံဖြင့် ဟောက် ပြောပြောလိုက်သည်..။ ဖိုးခွေးက စိတ်ထဲမှ ကြိတ်ရယ်လိုက်မိသည်..။ သူတို့ ထင်သလို ကမျင်းကြောထနေတာ မသိတာမှတ်လို့…။ ဖိုးခွေးက ဘာစကားမှ မပြောပဲ ပေရပ်နေသည်..။ ဘယ်မှာလဲ ကြက်ဥ…. ဟိုနားက စားပွဲပေါ်မှာ….. ဖိုးခွေးက တမင် ခပ်ဆတ်ဆတ်ပြန်ပြောသည်..။ သူ့အဒေါ်က မကျေနပ်သော အမူအယာနှင့် သူ့ဘေးက ရှောင်ထွက်ကာ စားပွဲဆီသို့သွားသည်..။ ဖိုးခွေးကလည်း နောက်က ကပ်လိုက်သည်..။ စားပွဲနား အရောက်တွင် သူ့အဒေါ်ကို နောက်ကနေ ကြုံးဖက်လိုက်သည်..။ အိုအို….ဒါ….ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ ဟင်….ခွေးမျိုး…ခွေးကျင့်ခွေးကြံ ကြံတဲ့အကောင်….ဖယ်…ဖယ်စမ်း…. မနုဝေက ပါးစပ်ကလည်း ပြော ရုန်းလည်း ရုန်းသည်..။
ဖိုးခွေးကလည်း တင်းသထက်တင်းအောင် ကြုံးဖက်ထားသည်..။ ဖယ်…..ဖယ်လို့ဆို….ငါက နင့်ကိုမွေးစားထားတဲ့ အမေနော်…..ပြီးတော့ နင့်အဒေါ်အရင်းခေါက်ခေါက်ကြီး….. မနုဝေက အတင်းရုန်းသည်..။ ဖိုးခွေးကလည်း အတင်းဖက်ထားသည်..။ သူ့ပေါင်ကြားက ထောင်မတ်နေသော လီးတန်ကြီးက မနုဝေဖင်ကြားကို ဖိထောက်ထားသည်..။ မနုဝေတစ်ယောက် ကြက်သီးတွေ တဖျင်းဖျင်း ထသွားသည်..။ ဖက်နေရင်းကပင် ရင်လျားထားသော ထမီကို ဆွဲချွတ်သည်..။ နဂိုကပင် ခပ်လျော့လျော့ ဝတ်ထားသည်မို့ ထမီက အောက်သို့ ကျွတ်ကျသည်..။ မနုဝေက လှမ်းအဆွဲ ဖိုးခွေးက နို့ကြီးတစ်လုံးကို ထိထိမိမိ ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်..။ ခပ်ရွရွလေး ဆုတ်ချေပေးသည်..။ မနုဝေ၏ တောက်လောင်စပြုနေသော ကိလေသာ ရမ္မက်မီးလျှံက ဟုန်းခနဲ ထတောက်သည်..။ ပေါင်ကြားရှိ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာလည်း လှိုက်ခနဲ လှိုက်ခနဲ ယားတက်လာကာ ဂုံညင်းဖားကြီးလို မာန်တွေထ၍ ဖောင်းကြွတက်လာသည်..။
ဖိုးခွေး…..ဖယ်စမ်းလို့ ဆို….၊ ဖယ်နော်…ပြီးမှ ငါ့ကို အဆိုးမဆိုနဲ့…. မနုဝေ ပါးစပ်ကသာ ဟန်လုပ်ပြောနေရသည်..။ ပေါင်ကြားက စောက်ဖုတ်ကြီးကမူ လီးနံ့ရ၍ အပြင်းအထန် လှုပ်ကြွလာသည်..။ ဝှက်ဖဲမှန်သမျှ အကုန်သိထားပြီးပြီမို့ မနုဝေစကားတွေက သဲထဲရေသွန်သလို လုံးဝ အရာမထင်တော့….။ တောက်…..ဖိုးခွေး…..ဖယ်စမ်းပါဆို….နင်တော့နော်……ငါလုပ်လိုက်တော့မယ်…. မနုဝေက ထမီကုန်းကောက်သည်ဟန်နှင့် ရှေ့သို့ အနည်းငယ် ကုန်းလိုက်ရာ နောက်သို့ပြူးထွက်လာသော စောက်ဖုတ်ကြီးက ဖိကပ်ထားသော လီးထိပ်ကြီးနှင့် အံကျ တေ့မိသွားသည်…။ အနည်းငယ် ထပ်ကုန်းလိုက်ရာ စောက်ဖုတ်အခေါင်းထဲ ဒစ်ခေါင်း ဝင်သွားသည်…။ စွပ်…..ဗြစ်….. အင့်…..ဟင့်…ဖိုး……ဖိုး ခွေး….အဒေါ်တောင်းပန်ပါတယ်…ကွာ….ငါ…ငါက နင့်မွေးစားအမေလေ…ပြီး…..ပြီးတော့ နင့်အဖေရဲ့ ညီမ အရင်း ..နင့် အဒေါ်အရင်းခေါက်ခေါက် ..မလုပ်ကောင်းဘူးနော်…..ငါ့သား။
အလွန်ကြီးမားနူးညံ့သောဒစ်ဆံကြီးက စောက်ဖုတ်အဝထဲ နစ်ဝင်လာသည့်အတွက် မနုဝေတစ်ကိုယ်လုံးရှိ အကြောတွေမှာ ရှိန်းဖိန်းဆိမ့်အီ သွားသည်..ကလေးမမွေးဖူးသေးသော စောက်ဖုတ်မို့အဝကကျဉ်းသည်စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကထူထဲပြီးနူးညံ့သည်…သား…..သား….မ…မလုပ်ကောင်းဘူးနော်…..လူလေးက လိမ္မာပါတယ်….မလုပ်နဲ့နော်…..အင့်…..ဟင့်…. ကောင်းပါတယ်…ဗျာ….. ဟင့်အင်း…ဟင့်အင်း……မလုပ်ပါနဲ့ကွာ…..နော်….နော်….လို့….မနုဝေ၏ တောင်းပန်သံက ဖိုးခွေးရာဂစိတ်ကို ပို၍ ပြင်းထန်ထကြွစေသည်…။ဖိုးခွေးက ဖင်ကိုကော့၍ အနည်းငယ် ထပ်ထိုးသွင်းလိုက်သည်။အီး……ကျွတ်ကျွတ်….အမေ့…ရှီး…..အ..အ… မနုဝေက အားမလိုအားမရ ဖြစ်ကာ သူမဖင်ဆုံကြီးကို နောက်သို့ ကောက်ကာ ကော့ပေးလိုက်မိသည်…။နွေးထွေးနူးညံ့သော စောက်ခေါင်းအတွင်းသားတွေကို ကြပ်ကြပ်တည်းတည်း ထိုးဖောက်၍ လီးတန်ကြီးက ဝင်ရောက်သွားတော့သည်…။
ဖိုးခွေးလီးက ဘဝပေးကုသိုလ်အရ အလွန့်အလွန် သန်မာထွားကြိုင်းလှသည်..။ အတုတ် ခြောက် လက်မခွဲ အရှည်က ခွန်နှစ် လက်မကျော်ကျော် ရှိရာ မနုဝေအဖို့ နာကျင် ဆိမ့်ကောင်းကြီး ဖြစ်နေပါတော့သည်…။ ကောင်းလားဟင်……..ဒေါ်ဒေါ်… အင်း…..ကောင်း …ကောင်း……ဟင့်အင်း…..ဟင့်အင်း…တော်….တော်ပါတော့…..ကျွတ်ကျွတ်…..အီး….အီး… ကောင်းသည်ဟု နှုတ်မှ ယောက်ထွက်သွားပြီးမှ ဟင့်အင်းဟု ငြင်းဆန်နေသည်…။ ငရဲ…ငရဲ…..ကြီးကုန်လိမ့်မယ်…..တော်….တော်ပါတော့နော်…….ဖိုးခွေးရာ….အဒေါ်တောင်းပန်ပါတယ်….တော်တော့ဟယ်…နော်..နော်…… ဖိုးခွေးက နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ခပ်တင်းတင်း ဆုတ်ကိုင်ဆွဲညှစ်ပြီး အသားကုန် ဆောင့်သွင်းထည့်လိုက်သည်..။အင့်…အ.အမေ့….အား…ကျွတ်…ကျွတ်….အ..အ.အမေ့..ကျွတ်..ကျွတ်…ရှီး….အ… လီးအတွေ့က ပူရှိန်းကျင်ဆိမ့်သွားစေသလို စောက်ဖုတ်အတွေ့ကလည်း အီဆ်ိမ့်ယားကြွသွားစေသည်..။
ဖိုးခွေးက သူ့ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ဆုတ်၍ လီးကြီးကို ဆွဲနှုတ်သည်..။ ပြီးတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပြန်သွင်းသည်..။အာ့….အ….အ..အင့်…ရှီး…..ကျွတ်.ကျွတ်….အီး….. မနုဝေ စောက်ဖုတ်အတွင်းသာနုနုတွေက လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကာ လီးကြီးကို ညှစ်ပေးထားသလို ဖြစ်လာသည်..။ အရသာတွေ စုဝေးထုံးဖွဲ့ထားသော ဒစ်ဆံကြီးတဝိုက် ပူရှိန်းယားကြွနေသည်..။ ခိုင်းနှိုင်းစရာ စကားလုံး ရှာမရအောင် ကောင်းလွန်းလှသည်..။ ဒေါ်….ဒေါ့်ကို….သ…သနား..ပါ..ကွယ်…တော်..တော်..တော့ နော်..တော်ပါတော့…ကွာ… ဖိုးခွေးက ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်ရမ်းရမ်း ၂၀ ချက်ခန့် ပစ်ပစ် ဆောင့်လိုက်သည်..။အမေ့…အာ့…အမလေး….အမေ့…..အင့်……အ..ငါ…ငါက…..အင့်…နင့် အဒေါ်..အင့်…..အမေ့………….အရင်း..အရင်းကြီး…..ရှီး…..အ…အား…အင့်…ပြီး….ပြီးတော့…အမေ့…အင့်……မွေး…စား…………အင့်.ဟင့်….အမေ…မေ….ရှီး.ကျွတ်ကျွတ်…အီး… မွေးစားအမေ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ အထူးမပြောချင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့်…အဒေါ်က ကျနော့အဖေရဲ့ ညီမအရင်း မဟုတ်ဖူး….အဖေက မွေးစားသားပါ…အဒေါ်နဲ့ အဖေက ဘာမှ မတော်ပါဘူး… ဖိုးခွေးက ပြောလည်းပြော ဆောင့်လည်း ဆောင့် …၊ တစစ ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းထန်လာသည်..။ ပင်ကိုအားအပြင် ကြက်ဥနှင့် အရက်တို့ကပါ အားဖြည့်ပေးထားသဖြင့် ဖိုးခွေးလီးကြီးမှာ သံမဏိချောင်းကြီးကဲ့သို့ မာကျော တောင့်တင်းနေပြီး ဆောင့်ချက်တွေက အံ့မခန်း ပြင်းထန်လှသည်..။အင့်..အ…အမေ့….အ..ဖွတ်….ရှီး….အမေ့…ဗြစ်….အမေ့…အာ..အ..အင့်….. အလိုးခံရသည့်အတွက် အလွန်အကျူး အထူးပင်ကောင်းနေသည့်အခိုက် ဖိုးခွေးစကားကြောင့် မနုဝေ အကြီးအကျယ် အံ့အားသင့်သွားရသည်..။ သို့သော် ဘာရယ်မှန်း သဲသဲကွဲကွဲ မသိရသေး..။ အလိုးခံလို့ကောင်းနေဆဲ တန်းလန်း သူမစိတ်တွေက ငယ်ဘဝဆီသို့ ပြေးထွက်ပျံ့လွင့်သွားရသည်..။ သူ့အစ်ကို ဖိုးခွေးအဖေ အိမ်သို့ရောက်လာပုံကို မှုံဝါးဝါး သတိရမိသည်..။
ဒါက…သမီး အစ်ကိုနော်…ဟိုးအဝေးကြီးက ပြန်လာတာ..မှတ်ထားနော်….သမီးလေး………… ဤသို့ သူမအဖေနှင့် အမေက တဖွဖွပြောကြသည်ကို တရေးရေး သတိရမိသည်..။ မိဘတွေရဲ့ စကားက သူမစိတ်ထဲမှာ စွဲထင် တေးမှတ်သွားခဲ့သည်..။ ဖွတ်…..ဖွတ်…ဘွတ်…အမေ့….အင့်…အ..အ..ရှီး….ကျွတ်…ကျွတ်..အ….အင့်..အိ..အိ…အင့်.အမေ့…….. အတိတ်အကြောင်း ဖျတ်ခနဲ တွေးမိရာမှ ပြင်းထန်လှသော ဖိုးခွေး၏ ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် ပစ္စုပ္ပန်ဆီသို့ ပြန်ရောက်လာသည်..။ ရဲရဲကြီးသာခံ…ဒေါ်ဒေါ်ရေ့……ဘာမှ ငရဲ မကြီး စေရဘူး…စိတ်ချ…. ပြောလည်းပြော ဆောင့်လည်းဆောင့် …၊ မနုဝေကလည်း အားကျမခံ သူမရဲ့ ဖင်ဆုံထွားထွားမောက်မောက်ကြီးကို ကော့ကော့ခံသည်..။
အင့်…အင့်..အ..အမေ့…အင့်..အင့်…အင့်ဟာ….နင့်…..နင့် ဘယ်သူက…ပြော..ပြော..လို့လဲ…….အိအိ….အ..အ….အမေ့… ကော့ကော့ခံရင်း မနုဝေက မေး၏ ..။ အပေါ်ထပ်ဘီရိုထဲက ဘဘရဲ့ ဒိုင်ယာရီထဲမှာ တွေ့တာ…ဗျ… ဖိုးခွေးက ပြောလည်းပြော ဆောင့်လည်း ဆောင့်သည်..။ ပြီးရင်…ပြမယ်…အခုတော့…ဆက်ခံအုံး…နော်………. အင့်..အင်း…အင်း ပါ……လိုးလိုး…….လိုး..နာနာဆောင့်…ပါ…..အမလေ….အီး…အ….အား….ကောင်း..ကောင်းလိုက်..တာ…ကွယ်….အ..ရှီး…ကျွတ်..ကျွတ်…..အား အား…….. ဓါတ်လိုက်သလို လူက တုန်ခါပြီး ဟပ်ထိုးလဲမတတ် ဖြစ်သွားသော မနုဝေကို ဆွဲထိန်းလိုက်ရင်း အချက် သုံးဆယ် ခန့် တလကြမ်း ပစ်ဆောင့်ရင်း ..လရေပူတွေကို ..ဗြင်းခနဲ…ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့သတည်း……ပြီးပါပြီ။